I-Self Contained Studio (imelene nesibhedlele) - I-Airbnb
I-Self Contained Studio (imelene nesibhedlele)
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguBridgette
Amava onke kukunika iindwendwe ubumfihlo obugcweleyo ukuze zive okusingqongileyo likhaya labo. Iindwendwe kusenokwenzeka ukuba azindiboni kodwa ndingumama weekati ezimbini ezibizwa ngokuba ngu-Archie no-Elvis abanobuhlobo kakhulu kwaye banokungena bathi molo. Ukuhamba ngemizuzu emihlanu ukuya kumbindi wesixeko, indlela yokuhamba elunxwemeni, iilwandle, iPukekura Park, iZiko laseAmanzi, iGovett Brewster Art Gallery, imuesum kunye nevenkile ezinkulu okanye uhambo lwemizuzu engama-20.
Indlu yeendwendwe yeyabucala kwaye isicwangciso esivulekileyo. Isitudiyo sinoyilo olumnandi kwaye lusekwe kwisitayela se-retro. Ifenitshala ivela kwiChadz Antiques eNew Plymouth; ngaphandle kwebhedi kunye nekhitshi yesimanje kunye neklasikhi. Ngomhla ocacileyo ufumana umbono wolwandle kumgama ukusuka emva kwendlu.
4.90 · Izimvo eziyi-224
Ummelwane unobuhlobo kwaye unentlonipho kwaye uchasene nesibhedlele. Ngamanye amaxesha uva i-helicopter engaqhelekanga njengoko isitalato sijongene nesibhedlele. Iivenkile zaseWesttown zihamba imizuzu emihlanu ukuya kwi-Westbar pub, umgaqo ongaphantsi, ipizza, isiTshayina, intlanzi kunye neetships, iideri, iLittle Federal Cafe kunye neThe Cure Cafe.
Sithetha nje isibhedlele siyakhiwa ngoko ke ingxolo inokuvakala emini.
Umbuki zindwendwe ngu- Bridgette
Ndisebenza emini kodwa andikhe ndibe kude (okanye uLeonie endibambana naye) ukuba iindwendwe zifuna naluphi na uncedo. Iindwendwe ezinokuthi zingandiboni (ukuba zikhethe ukuzihlola) kodwa ndihlala ndifumaneka ukuze ndincokole okanye ndikunike izimvo ngeendawo onokundwendwela okanye zokutyela ngaphandle.
Ndisebenza emini kodwa andikhe ndibe kude (okanye uLeonie endibambana naye) ukuba iindwendwe zifuna naluphi na uncedo. Iindwendwe ezinokuthi zingandiboni (ukuba zikhethe ukuzihlola…